Isukaphi indaba kaKhisimusi? | News24
Isukaphi indaba kaKhisimusi?
Sibongiseni "iNtshebe" Shangase
Durban - Ngihlale ngikhala njalo ngokuthi abantu abaningi bazifaka emikhubeni abangayiqondi ukuthi yasungulwa ubani kwakuthi ichaza ukuthini.
Kulesikhathi sonyaka abantu abaningi bathola ithuba lokuphumula emisibenzini eminingi abayenzayo bethi gozololo okwesikhashana kusongwe unyaka bese bephinde bekususa loko.
Njengengqapheli ezigcobile nginako ukunaka nezinto iningi labantu elizishaya indiva. Lento kaKhisimuzi angiyizwa kahle futhi angiyiwugubhi mina uKhisimuzi kepha ngithokozela iholidi nje nokuhlangana nabantu abaningi emndenini wami engingavamile ukubabona ngenxa yomsebenzi.
Sengihogele kaningi umkhondo ngomsuka kaKhisimuzi lo okuthiwa usuku okazalwa ngalo inkosi uJesu Kristo waseNazaretha olugujwa njalo zingamashumi amabili nanhlanu kuZibandlela.
Iningi lamabandla angamaKristu ayalugubha lolu suku lokuzalwa komsindisi wabo beze baqhoshe ngokuthi umhlaba wonke uyalubungaza lolu suku yize umphika uJesu. Kunabantu abaningi esengike ngahlala nabo bengixoxela ngoJesu abanye babo sebebuya khona ethuneni lakhe lapho angcwatshwa khona kwa-Israyeli.
Abantu bakwa-Israel bathi cha uJesu akazalwanga kuZibandlela ngalolu suku kepha abantu abaqoka lolu suku ukubungaza ikhefu lokusongwa konyaka kodwa akulona usuku lokuzalwa lukaJesu.
Uma kubhekwa ngokomlando oshicilelwe eBhayibhelini, kungenzeka ukuba uJesu wazalwa phakathi kukaNcwaba noMandulo.
Kuningi ke nokho esikudlayo namuhla esingakubuzi ukuthi kuvelephi, njengalezinkophe zokufakelwa nemisila yamahhashi exhunywa osisi emakhanda…angikho-ke lapho.
IBhayibheli likubeka kucace ukuthi iSabatha lingoMgqibelo kodwa iningi lamaKristu lilibungaza ngeSonto. Izinsuku zesonto ngesingisi zibizwa ngokuthi uMonday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday kanye neSunday.
Angikaze ngizwe noyedwa umuntu ezixaka ukuthi azi ukuthi ziqanjwe kanjani lezinsuku. Nansi inselelo aniyifakele izibuko ukuze nazi ukuthi izinsuku zesonto ngesingisi zisuselwephi futhi zisho ukuthini.
Ukuniluma indlebe nje, ziyakhuluma. Njengalo mkhuba wendoda enentshebe emhlophe namajazi abomvu agqize ngokumhlophe.
Nibe noKhisimuzi omuhle mina ngizobe ngiyitshukutsha kuze kuse ekhaya eNdwedwe kwaWosiyane esigodini saseMenyane!